Uthotho 'Ubomi obufihlakeleyo beMithi' kunye nemithi eyahlukeneyo eyi-137 | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Imithi ikwangumthombo omkhulu we inkuthazo yamagcisa amaninzi kwaye akukho lula kangako ukuzoba ukuba umntu ufuna ukungena kwiinkcukacha kunye nomsebenzi onzima ukuzichaza ngenye indlela.
UDina Brodsky ngumzobi uthando olukhulu kolu hlobo lwendalo kwaye kunyaka ophelileyo wayesele edwelise uthotho olubizwa 'Ubomi obufihlakeleyo beeFree'. Umbono osisiseko wale projekthi yayikukubonisa imithi eyi-126 eyahlukeneyo evela kuzo zonke iindawo zomhlaba.
Ngolu ngcelele bendifuna ukubhiyozela izinto eziphilayo ezisincedileyo ukuba sizicingisise, okanye nokuba sihambisane nenye yezona zinto zibalulekileyo kwindawo yentaba, Apho isiqu sakho sifuna ukuzola ngaphandle kwedolophu kunye noxinzelelo esixekweni.
U-Brodsky usebenzisa ukubonwa kunye nomfanekiso-ngqondweni wokuzoba imithi, ngokunjalo iifoto kunye namabali abanye babahlobo ababelane ngawo ukufaka isandla kwiprojekthi. Lo mzobi uthimba zonke iyantlukwano zeemilo, ubukhulu namaxesha onyaka asirhangqe kuyo imithi. Umzobi osekwe eNew York ozobe ezo zikhumbuzo zendalo zimiswe ukusuka kwiinyawo ezimbalwa ukuya kwelona liphezulu.
Sebenzisa iipeni zeinki zejeli ukubonakalisa olo tshintsho luza ngohlobo lwabantwana abatsha okanye ezo zininzi nomntu wabo. Kwaye ekubeni wazala unyana, igcisa laqhubeka nokongeza eminye imithi kule projekthi, enokuthi ilandelwe ukusuka kwi-Instagram.
Ithuba elihle lokudibana ubuchule bakhe obukhulu kunye nemithi yakhe eyahlukeneyo ukongeza umbala ngakumbi kuthotho lwe-gouache kunye neoyile. Uye wakhupha ezinye iziqwenga i-Etsy yakho ukuze babe nokufunyanwa kwaye unethuba lokusebenzisa ubugcisa babo ekhayeni lakho.
Umzobi one uthando olukhulu lwemithi njengoko unokufumana kwezi ziqwenga ekwabelwana ngazo kunye ne-Instagram yakhe.
Apha, UKruk usisa kwezinye iindawo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » I-126 yemithi eyahlukeneyo evela kwihlabathi liphela kuthotho 'Ubomi obufihlakeleyo bemithi'
Iiprojekthi zeKaizen sitsho
Inomdla! Kukho abo bazalwa benesipho ()
Phendula kwiiProjekthi zeKaizen